धनी बाउ र गिट्टी कुट्ने आमाकी छोरीको नागरिकता लिने धोको । |
धनी बाउ र गिट्टी कुट्ने आमाकी छोरीको नागरिकता लिने धोको ।
प्रकाशित मिति :2015-09-15 12:37:33
विजया श्रेष्ठ के.सी.
मस्यौदा संविधान सार्वजनिक भएदेखि यसलाई अझै महिलामैत्री बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै महिला मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, युवा तथा व्यक्तिहरुले संविधानमा महिला हक र समानताका लागि आवाज उठाउदै आइरहेका छन् । एक महिनादेखि यस विषयलाई अझै व्यापक रुपमा अघि बढाउन र राजनीतिक दल, संविधानसभा तथा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउनका लागि हामीहरू सडकमा उत्रिएका हौ । विभिन्न खाले कार्यक्रमहरूबाट सडक तताइरहेको भएता पनि महिलामैत्री संविधान संसोधनका प्रस्तावना तथा प्रक्रियावाट महिला समानताका कुरालाई प्रमुख राजनीतिक दल तथा सभासदहरूले पन्छाईरहेका छन् तर हाम्रो आन्दोलन जारी छ । यसै सन्दर्भमा धेरै र सँधैै जस्तो आन्दोलनमा सरिक हुने एक युवतीले आफ्नो कथा यसरी सुनाइन् । उनकै शव्दमा यो कथा यस्तो छ :-
सायद म त्यति वेला लगभग एघार वर्षकी थिएँ । त्यो दिन मेरो सानो मुटु ढुक ढुक वजिरहेको मैले स्पष्ट सुनिरहेकी थिएँ । मेरा हात खुट्टा जिउ थर थर काँपीरहेका थिए ,मत हावा हुण्डरी आउने वेलाको आकाश जस्तै कालो नीलो भएकी थिएँ , विहानदेखि अन्नको एक गेडा मेरो घाटीमा छिर्न सकेको थिएन ,रातभर झिमिक्क आँखा लागेको थिएन । मैले कैले नदेखेको ,कैले नचिनेको दुईजना पुरुष मेरो भाग्य रेखा कोर्दै थिए र मेरो भविष्य वारे निर्णय गर्दै थिए , म कठघरामा राखिएकी निर्जिव पुतली जस्तै थिए ।
मेरो जीवनमा पहिलो पटक म मलाई हुर्काउने सानीमासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं गएकी थिएँ । त्यहाँ एकै छिन उभिन पनि मलाई धौ धौ भैरहेको थियो । सानीमाको सारीको आँचललाई सुरक्षा कवच वनाएर म सानीमासँग चपक्क चिप्किएकी थिएँ । सानीमा वेला वेलामा – “नानु नडराउ, म छुनी ! ” भन्नुहुन्थ्यो । तर मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेकी थिइन । मेरा ओठ मुख सुकीरहेका थिएँ । त्यत्तिकैमा सि.डि.ओ साहेव त्यही लवीवाट आउनु भो । म डराएको देखेर होला –“किन डराएकी नानी नडराउ” भनि मेरो पिठमा धाप दिनुभयो । म अलिकती ढुक्क भएँ । सायद वुवाको स्पर्श यस्तै होला भनि अनुभूति गरें ।
केहीवेरपछि तीन चार जना प्रहरीको साथमा मेरो बाबु भन्ने मान्छे आए । उनी व्यापारी ठूला मान्छे रे । कालो चस्मामा, मुठे जुङ्गा पालेका हट्टाकट्टा खाइलाग्दा देखिन्थे । मैले विस्तारै विस्तारै सानीमाको आँचल भित्रवाट नै डराई डराई हेरें । झट्ट हेर्दा टि.भी.मा देखिने डाँका जस्तै लाग्यो मेरो बाबु भन्ने मान्छे । उनले मलाइ देखे देखेनन् हेरे हेरेनन् थाहा छैन । मलाई झनै डर लाग्यो ।
मेरी सानीमा र अधिकारकर्मी आण्टीहरूको प्रयत्नले मेरो सर्जिवन गराईएको रहेछ । भित्र सि.डि.ओ. सावको कोठामा निकै वेर गलफत्ती हुँदै थियो, मैले वुझीनँ । त्यत्तिकैमा सि.डि.ओ. सावले मलाई भित्र वोलाइ नम्र भाषामा सोध्नु भो –“नानी उहाँ तिम्रो बुबा हुनु हुन्छ उहाँसँग गाडी,वंगला, थुप्रै सम्पत्ति छ , तिमीलाई राम्रो स्कूलमा पढाउनुहुन्छ । तिमी उहाँसँग जाउ है ? भनि सोध्नुभो । त्यहाँ म जान्न भनेर वेस्सरी रोएँ । चिन्दै नचिनेको देख्दै न देखेको मान्छेसँग वलजफ्ती पठाइ देलान भन्ने डरले सानीमासँग अझै टाँसिएर बसेँ । सि.डि.ओसाव दयालु रहेछन् –“भैगो नानी नरोउ तिमीलाई वलजफ्ती पठाउँदैनांै , सानीमासँग जाउ ल” भनि छुट्टी दिनु भो ,वल्ल अली ढुक्क भएँ । त्यो रात लडाई जितेको सिपाही जस्तै सानीमा आनन्दले निदाउँनु भो । तर, म भने त्यो ‘वाउ ’ भन्ने मान्छेको अनुुहार सम्झेर रातभरी डराइ रहे । निकै दिनसम्म म विचलित भएँ ।
विस्तारै ,विस्तारै म विरामी पर्न थालें । खाना खान मन नलाग्ने ,खाना नपच्ने वेला वेलामा वान्ता हुने, ज्वरो आउने हुन थाल्यो । स्कूलमा सर मीसले पढाएको पनि ध्यान जाँदैनथ्यो । कति फेर स्कूलमा वान्ता भो, वान्ता हुन्छ होला भन्ने डरले म स्कूल नजाने वहाना खोज्न थाल्थें । किताव खोल्दा रिङ्गटा लागे जस्तै हुन्थ्यो । के गरौं के गरौं जस्तो छटपटी हुन्थ्यो । मलाई मेरो जीन्दगी नै भारी लाग्न थालेको थियो । सानीमाले मलाई वैद्यदेखि डाक्टरसम्म झारफुकदेखी योगासम्म लानु भो । मलाई फाइदा भएन । म त्यो वर्ष परीक्षामा फेल नै भए । त्यो वेला मलाई क्रोनिक डिप्रेसन भएको रहेछ भन्ने एैलेमात्रै थाहा पाएँ ।
म अस्पतालको वेडमा निदाईरहेकी थिएँ । मेरो मुहारमा परेको दुई चार थोपा आँसुले मेरो निद्रा खुल्यो । आमा मेरो सिरानीसँगै वसेर मेरो कपाल मुसार्दै हुनुहुँदो रहेछ । झट्ट मैले उहाँलाई चिन्न सकिनँ । हल्का लिपिष्टिक,गाजलु आँखा, मिलेका आँखी भौं, सफा चिटिक्क परेको लुगामा मेरी आमा मलाई विश्व सुन्दरी भन्दा राम्री लाग्यो । जुरुक्क उठेर म्वाई खान मन लाग्यो । त्यो भन्दा पहिले मेरी आमाले मलाइ अंगाली सक्नुभएको थियो । त्यो रात मेरी आमाको काखमा सुत्दा म कति आनन्द र ढुक्क भै सुतें ।
म आमाको गर्भमा दुइ महिनाकी हुँदा परम्परा अनुसार मागी विहे गरेकी मेरी आमा हिँउदको मध्य रातमा घरवाट तिनै “वाउ” भन्ने मान्छेवाट धकेलिनु परेको थियो । एकसरो कपडा, गर्भिणी अवस्था छिन छिनमा वाकवाकी वान्ता हुने, टाउँको फुट्ला जस्तै दुख्ने, ज्वरो आउने मेरी एक्ली आमालाई घरबाट निकालिएपछि आफ्नो कोही नभएको ठाँउमा कस्तो भयो होला ? नराम्री र त्यो “वाउ” भनेको मान्छेलाई यौन तृष्णा मेटाउन नसकेको भनेर फालिँदा मेरी आमाले कसरी सहिन् होला ? म कल्पना गर्नपनि सक्दिनँ । आत्महत्याको प्रयास गर्दापनि नमरेकी मेरी आमाले कसरी मलाई जन्माइन्, पालिन् म सोच्नै सक्दिनँ । घरबाट निकालिएपछि सडकको गिट्टीसँग मेरी आमाले मितेरी लगाइन् । गिट्टी कुट्दै मलाई जन्म दिइन्, आमाको गिट्टी फुटाउने ठाउँ नै मेरो स्वर्ग भो, गिट्टीमा नै मैले पहिलो पाइला टेकें, निर्जिव गिट्टीमा नै मैले जिवन पाएँ । हात खुट्टा चलेदेखि मैले आमालाई गिट्टी फुटाउन सघाएँ ।
मेरो मामा माइजुहरूको आफ्नै पैत्रिक घरवार सम्पति थियो । तर मेरी आमाले त्यहाँ आश्रय खोजिनन् । कारण अंश र वंश छोराले मात्र पाउने, बेइज्जत हुन किन जाने भनि कसैसँग केही मागिनन् । मेरो “वाउ” भन्नेसँग त झन धेरै सम्पति थियो रे । मेरी आमा उनकी कान्छी श्रीमतीसँग पनि गिडगिडाउन गइनन् ।
तर मेरी आमाको दिन फर्कियो । एक दम्पतिले मेरी आमालाई काममा लगाइदिन विदेश लाने प्रस्ताव राखे । स्वाभिमानी मेरी आमाले यिनै सानीमाको पोल्टामा मलाई छाडेर विदेश गइन् । घरमा सानीमाले आफ्नो छोराछोरीको पेट कटाएर मलाई पाल्नु भो, हुर्काउनु भो, पढाउनु भो । त्यो वेला म पाँच वर्षकी थिएँ ।
स्कूलमा म पढ्न अव्वल थिएँ, फिस तिर्नु पर्दैनथ्यो । सवै साथीहरू मसँग झ्याम्मिन खोज्थे । तर, सँधै उनीहरूसँग म तर्की तर्की टाढा भाग्थें । म कहिल्यै साथीहरूसँग खेल्न गइन । साथीहरू आफ्नो जन्मदिन मनाउँथे, अभिभावक दिवसको दिन आमा बुबासँग रमाउँथे ,तर म सँधै स्कूलको ट्वाइलेटमा गएर रुन्थें । छुट्टीमा साथीहरू घुम्न , सिनेमा हेर्न, मेला हेर्न जान्थे म चाहीँ सानीमाको सानो चिया पसलमा ग्राहकले चिया खाएको जुठो कप माझ्नुपथ्र्यो, सानीमालाई सघाउँथे । आमाको धमिलो मायालु अनुहारको याद गर्दै छिमेकीको घरमा कैले कैले आउने फोनको प्रतिक्षमा दिन गन्दै वस्थें ।
मेरी आमाले आज मलाई डाक्टर पढाउँदै छन् । अब एकवर्ष पछि म एम.वि.वि.एस. पुरा गर्छु । पढाईमा म अझै अव्वल छु । अहिले म साथीहरूसँग डराई डराई भाग्दिनँ । बरु बुझेको कुरा सवैलाई सिकाउने र सिक्ने प्रयत्न गर्छु ।
मसँग अझै नागरिकता छैन । हाम्रो देशमा भै रहेको नागरिकता वा पहिचानको आन्दोलनमा म पनि “र” होइन “वा” को पक्षमा लडीरहेकी छु । पारित भएको नागरिकता सम्बन्धि धारामा जालझेलको भाषा देख्दैछु । तर, म सर्तक छु अव कसैले मेरो र मेरी आमाको हक खोस्ने छैनन् । म त्यो दिनको पर्खाइमा छु जुन दिन नराम्री भनी फ्यालिएकी मेरी विश्व सुन्दरी जस्तै आमालाई अघि अघी लगाई त्यही सि.डि.ओ कार्यालयमा म आमाको नामवाट नागरिकता लिन सगौरव जानेछु ।
प्रकाशित मितिः २०७२ भदौ २९ गते मगंलवार